OnePlus 8T igwefoto nyochaa: olee otu igwe igwe quad ya si di nma? | Gam akporosis
Igwefoto OnePlus 8T dị mma, mana ọ naghị atụgo elu-elu [Nyocha igwefoto]
Na ọgbọ ọhụụ ọ bụla nke ekwentị dị elu, ihe ndị ọrụ chọrọ n'ọkwa foto dị elu, ọ bụ ya mere ndị na-emepụta ama ama na-eji achọ igwe foto nke ekwentị ha, yana karịa na ọkọlọtọ ha. A na-ejikwa iwu a site n'aka OnePlus na ụdị ọhụụ ọ bụla.
El OnePlus 8T Ọ bụghị igwe kachasị elu na katalọgụ ụlọ ọrụ (ọ bụ OnePlus 8 Pro), ma nke abụọ bụ. Ọ bụ ezie na ọ na-abịa na ọnụahịa dịtụ ọnụ ala, sistemụ igwefoto ya anaghị enye arụmọrụ kachasị elu, mana ọ ka na-enye ezigbo nsonaazụ foto. Ihe bụ na ọ naghị asọmpi na ekwentị ndị ọzọ, nke a bụ ihe pụtara ìhè na nyocha nke DxOMark mere kamera nke OnePlus 8T.
Onye OnePlus 8T nwere usoro igwefoto dị mma, mana ọ bụghị nke kachasị mma
Tupu ịkọwapụta otú mkpanaka ahụ si mee n'ule ndị ahụ, ọ bara uru ịkọba ama etu esi etinye usoro igwefoto ya, nke dị okpukpu anọ. Nke a nwere ihe mmetụta 48 MP kachasị nwere oghere f / 1.7, oghere 16 MP na oghere f / 2.2, 5 MP macro shooter nwere oghere f / 2.4 na ihe ọzọ 2 MP bokeh nwekwara oghere f / 2.4.
OnePlus 8T igwefoto ọtụtụ | DxOMark
Site na akara igwefoto nke 111 nke ndị ọkachamara DxOMark nyere ọtụtụ nyocha na nyocha, Onye OnePlus 8T dị n'etiti ogo nke igwe nwere igwefoto kachasị mma n'elu ikpo okwu nke oge a, na-ekekọta ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọnụ dị ka Google Pixel 4a na Sony nke Xperia 5 Mark II.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, igwefoto dị elu nwere ike ịse foto na nsonaazụ ọma na ọnọdụ kacha mma, nke gosipụtara na akara nke 115 na ụdị foto. Agbanyeghị, n'okpuru ọnọdụ dịtụ mgbagwoju anya, achọpụtara ntụpọ pụtara ìhè.
N'ozuzu, na OnePlus 8T na-enweta foto site na ikpughe dị mma, ma ndị a na-enwekarị mmachi ike dịtụ ntakịrị nke na-achikota na ụfọdụ na-enwu gbaa na / ma ọ bụ ọchịchịrị ebe n'okpuru elu iche ọnọdụ. Mgbe ị na-agbapụ n'abalị, ndị nyocha DxOMark hụkwara mgbanwe siri ike na ikpughe na oke ike na ọtụtụ foto enwetara.
Nkọwa nke agba na ogbugba nke ọ bụla anaghị abụkarị nke ziri ezi. Ọtụtụ foto na-ekpughe nuances agba ma ọ bụ mmeputakwa agba nke ezighi ezi dịka atụ anya ya, na ọbụna karị karị mgbe ị nọ n'ọnọdụ ọkụ dị ala.
Ihe onyonyo onyonyo, nke gha agbaghari na onyonyo ma obu njehie nke emeputara site na ntule, adighi adi na OnePlus 8T, mana ha na adi karie otutu uzo, obu ezie na ha nwere ezi uche. Enwekwara ihe isi ike na-elekwasị anya na ụfọdụ gbaa.
DxOMark gosipụtara nke ahụ ọnọdụ bokeh nke OnePlus 8T na-arụ ezigbo ọrụ , si otú na-amụba nnọọ ihe ịga nke ọma ubi blur mmetụta na ezi na-elekwasị anya isiokwu ókè.
Onye OnePlus 8T enweghị ihe mmetụta telephoto na modul igwefoto ya. Ya mere, dị ka a tụrụ anya ya, ogo ihe oyiyi nke mbugharị mbugharị abụghị nke kachasị mma, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na mkpanaka ahụ enweghị ike ịme nnukwu otuto.
Igwefoto dị obosara na-enye echiche dị mma, mana ọ bụghị nke kacha dị obosara, ị na-ahụkarị ọnwụ nke nkọwa dị nkọ na mkpọtụ na agbapụ sitere na ihe mmetụta a. Ọzọkwa, a na-ahụkarị ihe ndị dị na mbara igwe na mbara igwe karịa ndị ejiri isi mkpuchi mee.
Dabere na ndekọ vidiyo, akara nke 102 na-etinye ya n'etiti ọkwa nke ikpo okwu, nke na-ahapụ anyị ezigbo mkpanaka maka ya, mana ọ bụghị otu kachasị mma, ọ bara uru. Igwefoto na-enye ezigbo nkwado vidiyo, ezigbo nguzo ọcha na agba ụtọ.tinyekwara ụda mkpọtụ a na-achịkwa nke ọma, ọ bụrụhaala na ị naghị ekpughe onwe gị n'ọnọdụ ndị dị ala.
Ihe nwere ike ịbawanye mma na ngwaọrụ a bụ sistemụ mgbado anya na ọnọdụ ndekọ, nke dara na ọnọdụ ọkụ dị ala, enweghị oke oke, yana ọsọ ọsọ na-ebelata nke ukwuu, ma e jiri ya tụnyere ihe ọ ga-enweta n'ọnọdụ ọkụ dị mma. Agbanyeghị, ọ na-ejisie ike lekwasị anya na njedebe.
Na nkenke, anyị anaghị eche ihu igwe dị elu na igwefoto kachasị mma niile; Enwere nhọrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na-enye nsonaazụ kacha mma, naanị anyị nwere ihe atụ atọ nke a na Huawei Mate 40, Xiaomi Mi 11 na Galaxy S21. O sina dị, nsonaazụ nke ekwentị na-enye adịghị njọ; ha mara ezigbo mma, ha na-enwetakwa ọtụtụ atụmanya, yabụ ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-ese foto, aka ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Igwefoto OnePlus 8T dị mma, mana ọ naghị atụgo elu-elu [Nyocha igwefoto]
Clan N sitere na Steam dị ka nnukwu egwuregwu egwuregwu Double Dragon
Na-eje ije site na mbara igwe, ụwa na mmiri na MMORPG Blade & Soul: Revolution